१२ वर्षपछि कुम्भ राशिमा गुरु बृहस्पतिको प्रवेश : सुर्य झैं चम्किनेछ यी ५ राशिको भाग्य ! – List Khabar
Home / रोचक / १२ वर्षपछि कुम्भ राशिमा गुरु बृहस्पतिको प्रवेश : सुर्य झैं चम्किनेछ यी ५ राशिको भाग्य !
१२ वर्षपछि कुम्भ राशिमा गुरु बृहस्पतिको प्रवेश : सुर्य झैं चम्किनेछ यी ५ राशिको भाग्य !
admin February 7, 2022 रोचक Leaveacomment 301 Views
देव गुरु बृहस्पति आज कुम्भ राशिमा प्रवेश गरेका छन् । बृहस्पतिको यो परिवर्तनले केही राशिका लागि शुभ समय ल्याउने भएकाले केही राशिका व्यक्तिहरूलाई सावधान रहन सुझाव दिइएको छ ।मेष, मिथुन, धनु, मकर र कुम्भ राशिका लागि लाभको संकेत रहेको छ । बृहस्पति अर्थात् बृहस्पति ग्रहले हाम्रो अनुभव, ज्ञान र हाम्रो लक्ष्यलाई विस्तार गर्दछ। बृहस्पतिले आशावाद, वृद्धि, उदारता र प्रचुरताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। बृहस्पति ग्रहलाई ‘गुरु’ ग्रहको दर्जा छ।
कुम्भ राशिमा निम्न राशिबाट पुग्छ:बृहस्पतिलाई धनु र मीन राशिको स्वामी मानिन्छ। कर्कट यस ग्रहको उच्च राशी हो भने मकर राशि दुर्बल राशि हो। ज्योतिष शास्त्रमा गुरुलाई ज्ञान, शिक्षक, शिक्षा, जेठा भाइ, सन्तान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, दान, पुण्य, धन र वृद्धि आदिको कारक मानिन्छ।बृहस्पति ग्रह २० नोभेम्बर २०२१ को बिहान ११ः२३ बजे कुम्भ राशिमा प्रवेश गरेको छ । यस ट्रान्जिटले सबै १२ राशिहरूलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर हामी तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी दिँदैछौ ।
मेष : मेष राशिको चन्द्रमाको नवौं र बाह्रौं घरको स्वामी बृहस्पति हो। आम्दानी, नाफा र इच्छाको एघारौं घरमा संक्रान्ति भइरहेको छ ।यस गोचरको अवधिमा मेष राशिका व्यक्तिहरूले आलस्य त्यागेर सक्रिय हुन थाल्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा, तपाईले यो ट्रान्जिटको समयमा विवाह, घर किन्नु वा घरमा सानो पाहुनाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
वृष : बृहस्पति वृष राशीका लागि आठौं र एघारौं घरको स्वामी हो। करियर, नाम र कीर्तिको दशौं घरमा प्रवेश गर्दैछ ।कार्यमा केही बाधा आउन सक्ने भएकाले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोस्। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दा यो पारवहनमा यहाँका बासिन्दाले सानातिना स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आर्थिक रूपमा यो ट्रान्जिटको समयमा कसैलाई पैसा नदिन सल्लाह दिइन्छ।
कर्कट : कर्कट राशिको लागि बृहस्पति ६ औं र ९ औं घरको स्वामी हो र ८ औं घरमा गोचर गर्दैछ, जसले अचानक हानि वा लाभ र उत्तराधिकारको नेतृत्व गर्दछ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट, तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने सानातिना स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगहरूले तपाईंलाई सताउन सक्छ। वर्षको सुरुवात अन्योल र जोखिमपूर्ण रहनेछ। यस कारणले गर्दा, तपाईंले अनावश्यक गल्तीहरू गर्नबाट जोगिनु पर्छ, किनकि भविष्यमा तिनीहरूलाई सच्याउन गाह्रो हुन्छ।
सिंह : बृहस्पति सिंहको लागि पाँचौं र आठौं घरको स्वामी हो। विवाह र साझेदारीको सातौं घरमा संक्रमण हुँदैछ। सिंह राशिका लागि यो समय सबैभन्दा उपयुक्त रहनेछ किनभने यो वर्ष प्रेम विवाहमा परिणत हुन सक्छ। यो जागिर परिवर्तन वा स्थानान्तरणको बारेमा सोच्न सल्लाह दिइन्छ।
कन्या : कन्याका लागि चौथो र सातौं घरको स्वामी बृहस्पति हो र ऋण, शत्रु र दैनिक ज्यालादारीको छैठौं घरमा गोचर गर्दैछ। यदि तपाइँ नयाँ काम सुरु गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, शहर कसरी परिवर्तन गर्ने र भविष्यमा तपाइँको जागिर छोड्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ केहि समस्याहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि रोगलाई कम नठान्नुहोस्, समयमै उपचार नगरे अवस्था बिग्रन सक्छ। आर्थिक रूपमा यो तपाईंको लागि चुनौतीपूर्ण समय हुन सक्छ किनकि तपाईंको खर्च बढ्न सक्छ।
Previous सुन्दरताका खानी यी ५ अभिनेत्री अझै छन् बुढीकन्या, भेटेका छैनन् मिस्टर परफेक्ट
Next जंगलमा टोली बोलाइयो, जाँच गर्दा सुरक्षाकर्मी लाजले भुतुक्कै